Qualcomm weputara Snapdragon 450 ohuru na Snapdragon wear 1200 processors | Androidsis
Qualcomm weputara Snapdragon 450 ohuru na Snapdragon Wear 1200 processors
Nzụlite teknụzụ na - aga n'ihu n’enweghi ike igbochi ya, ọkachasị ma ọ bụrụ n ’ihe gbasara igwe eji arụ ọrụ. Otu n'ime ụlọ ọrụ ebe a na-enwekwu ọganihu, na nke asọmpi kasịnụ ga-adị n'ọdịnihu dị nso, bụ ebe ndị na-emepụta ihe, obere ihe ndị ahụ na-adịwanye ike, na-arụ ọrụ nke ọma, na-enweghị nke ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume anyị iji ekwentị anyị, smartwatches anyị kwa ụbọchị, ma ọ bụ ka m na-ede edemede a site na mbadamba ugbu a.
Na n'echiche a, nnukwu Qualcomm na-aga n'ihu, ma ọ dịkarịa ala, otu n'ime ndị eze na-enweghị mgbagha. Ugbu a, maka emume ọhụụ nke Mobile World Congrees ngosi emere nke emere na ụbọchị ndị a na Shanghai, Qualcomm ejiriwo ohere kpughee ndị nhazi ọhụrụ abụọ. Na otu aka, na Snapdragon 450, mmelite nke ụlọ ọrụ n'etiti-nso mobile SoC; na n'aka nke ọzọ, Snapdragon Wear 1200 chip nke, dị ka aha ya na-egosi, na-elekwasị anya na ahịa maka ngwaọrụ maka ọrụ ahụ na ahụ ike.
1 Qualcomm Snapdragon 450
2 Qualcomm Snapdragon Wee 1200
Otu n'ime ndị nrụpụta ohuru nke nnukwu Qualcomm gosipụtara bụ Snapdragon 450 nke, nke nwere octa-core Cortex-A53 nhazi, egosiri dị ka onye sitere n'okike nke Snapdragon 435, yana obere nke Snapdragon 400 usoro nhazi. ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ na-eji a ọhụrụ 14nm n'ichepụta usoro kama usoro nke ochie 28nm. Ya mere, na-akpaghị aka, akwụkwọ akụkọ ndị a na-egosi ịdị ike ka ukwuu nke, dịka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, nwere ike ịtụgharị ruo awa anọ ọzọ eji, n'otu oge na ewelitela ọsọ elekere site na 1,4 GHz ruo 1,8 GHz. arụmọrụ dị elu, ọsọ ọsọ na arụmọrụ ike dị elu.
Mgbanwe ndị ọzọ gụnyere gụnyere nweta nkwalite site na Adreno CPU 505 ka Adreno 506, nke sụgharịrị ịbụ a mkpụrụ na-abawanye ruo 25 pasent.
Ọzọkwa Image Image Processor (ISP) ka emelitere ma ugbu a na-akwado ma otu igwefoto 21 megapixel na sensọ megapixel 13, yana nkwado maka Qualcomm Clear Sight na Bokeh na ezigbo oge. Emeela ka ọnụ ọgụgụ vidiyo ahụ gaa na 1080p60, ma e jiri ya tụnyere 1080p30 na nhazi Snapdragon 435 gara aga.
Mana n'agbanyeghị akụkọ ahụ, a ka nwere myirịta dị n'etiti Snapdragon 450 ọhụrụ na nke ochie 435. N'etiti ha, otu modem LTE X9 ahụ na-agba ọsọ ọsọ n'etiti 150 Mbps na 300 Mbps, ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na-anọgide na ndị nhazi abụọ ọ bụ ezie na na nke ikpeazụ, a na-emelite onye ọkwọ USB ka ọ kwado nkwado mbufe data 3.0 ka mma.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Snapdragon 450 ọhụrụ a na-ekerịta ụdị nkọwa dị iche iche na Snapdragon 630 nke dochiri Snapdragon 625 n'ọnwa gara aga, ọ bụ ezie na nke a ekwesịghị iju anya na, ebe ọnụahịa na-ada, atụmatụ na-amalite ịda site na ọkwa dị elu.
Qualcomm Snapdragon Wee 1200
Nke abụọ nke nhazi ahụ nke Qualcomm gosipụtara bụ ezubere maka ngwaọrụ weara (smartbands na smartwatches) nke etiti dị ala, ọ bụ Snapdragon Wear 1200, yabụ ọ bụ obere mgbawa nke na - eme ihe 79 square millimeters (45% pere mpe karịa onye bu ya ụzọ). Nke a pụtakwara na ọ nwere oke obere mmachi na otu 7 GHz Cortex-A1,3 n'ime, Otú ọ dị, ọ ga-ezuru iji ike ngwaọrụ ndị na-eri obere ume dị ka ekweisi, quantifying ọla aka, wdg.
Ihe ohuru nke Snapdragon Wear 1200 processor processor kwado GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou na LTE Cat-M1 na LTE CatNB1 nke kwesiri iji nyefee obere data n’elu web ma oso oso mee oku VoLTE.
Ọzọkwa, ọ dakọtara na Linux na ThreadX sistemụ arụmọrụ, nke pụtara na anyị agaghị ahụ ya na gam akporo Wear ngwaọrụ.
Yana atụmatụ nchekwa na nzuzo ọzọ ị nwere ike ịkpọ ebe aSnapdragon Wear 1200 bụ nhọrọ dị ala ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nyiwe ụlọ ọrụ Wear 2100.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Qualcomm weputara Snapdragon 450 ohuru na Snapdragon Wear 1200 processors
[APK] Nke gara aga, otu a ka Pixel Launcher kwesịrị ịdị
Anyị na-eche ihu Honor 9 na Xiaomi Mi6